Somaliska | Somaliska
Xulka qaranka kubadda cagta dalkaan Iswiidhan ayaa u soo baxay ama u soo gudbay cayaaraha adduunka ee sanadka soo socda lugu wado in lugu qabto dalka Ruush-ka. Kooxda qaranka Iswiidhan oo xalay ay fooda...
Soomaalida Iswiidhan gaar ahaan kuwooda aad u adeegsadda baraha bulshada ayaa hadal haya barnaamij muuqaal ah oo telefeyshinka dalkaan Iswiidhan sii daayey toddobaadkii hore. Barnaamijkaas uu soo iibsaday oo ka hadlayey waxqabad ku sheega ciidammadda...
Kooxaha cunsuriyiinta ah ee NMR oo Göteborg banaanax ka sameeyey
Kooxo cunsuriyiin ah oo ka tirsan kooxda Wax iska caabinta Noordiga ee NMR, ayaa maanta waxeey banaanax ku sameeyeen bartamaha magaaladda. Kooxdan oo tiro ahaan ahaa tobbaneeyo ayaa markii dambe noqday labaataneeyo. Waxeeyna keentay...
Labadii maalin ee ugu dambeeysay waxaa magaalada Göteborg meelo kala duwan lugu qabtay munaasabado baroordiiq ah oo loo sameeynayo dadkii ku wax yeeloobay qaraxii ka dhacay bartamaha magaaladda Muqdisho toddobaad ka hor. Baroordiiqdan oo...
Soomaalida Göteborg oo u baroordiiqeeysa weerarkii ka dhacay magaaladda Muqdisho
Weerarkii ka dhacay bartamaha magaaladda Muqdisho ee qasdigiisa ahaa in lugu gumaado shacabka soomaaliyeed. Waxeey falkani xanuun ku reebtay soomaalida guud ahaan kuwooda ku nool caalamka iyo dalkaan Iswiidhan. Maalinta sabtida ayaa waxaa lugu...
Borås: 16 jir gabar soomaali ah oo meydkeedii laga helay maqaasiin
Magaaladda Borås ee galbeedka Iswiidhan, ayaa waxaa habeenimadii sabtida soo galay waxaa meeydkeeda laga helay gabar soomaaliyeed oo lix iyo toban jir ah, maqaasiinka alaabtada la dhigto ee källare-ha loo yaqaano. Gabadhan ayaa waxaa...
Ma dhab baa in madaxweyne Donald Trump yahay ninka ugu khatarta badan caalamka?
Shaki kuma jiro in hab dhaqanka qalifsan ee mararka qaar uu ku kacdo madaxweynaha dhawaan la doortay ee Donald Trump yahay la iska weydiinayo in uu yahay ruux caafimaadkiisa taam yahay. Sifaadka cajiibka ah ee...
Nin aan la aqoon sababta kaliftay in uu is gubo ayaa u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray dabkii uu is qabadsiiyey. Ninkan oo maalintii shalay aheyd kaniisadda lugu magacaabo Domkyrkan ee ku taala bartamaha...
Safaaradda Mareeykanka ee dalkaan Iswiidhan ayaa uga digtay muwaadiniinta ku sugan dalka in ay tagaan magaaladda Göteborg maalinta berito ah oo ay ka dhacayaan banaanbax balaaran oo ay dhigayaan kooxaha mdaxa faquuqa qaba ee...
Xayeysiiska kooxaha cunsuriyiinta ah oo lugu dhejiyey garoonadda Göteborg
Gidaaraddda muraaydaha ah ee xayeeysiiska lugu dhejiyo ee magaaladda Göteborg, ayaa maanta oo talaado ah waxeey dadka ku waaberiisteen sawiro barabagaando ah oo ay leeyihiin kooxaha cunsuriyiinta ah gaar ahaan wargeyska taageera afkaarta kooxahan...
Noorweey oo sheegtay in xirriir kala dhaxeeyo laanta socdaalka Soomaaliya
Hey’adda socdaalka dalkaasi Noorweey ayaa shaaca ka qaaday in xirriir wada shaqeeyn uu kala dhaxeeyo waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya. Hey’adan ayaa sheegtay in laanta ka teegeerto howlaha la xirriira dib u dhiska iyo...
Kulan lugu horumariniyo afka soomaaliga oo magaaladda Göteborg lugu qabtay
MAGAALADDA GÖTEBORG, ee caasimadda labaad ee dalkaan Iswiidhan ayaa habeeninadii xalay aheyd waxaa lugu qabtay shir looga hadlayey horumarinta afka soomaaliga. Shirkankan oo ahaa mid aay ka soo qeyb galeen aqoonyaho, waalidiin iyo carruuro...